La shaandheeyey soo bandhigistii ugu horreysey ee 3D ee taleefanka casriga ah ee 5G ee Huawei | Androidsis
La shaandheeyey tixgelintii ugu horreysay ee 3D ee taleefanka casriga ah ee isku laabma ee 5G ee Huawei
Bishii Oktoobar 2017, Richard Yu, oo ah madaxa shirkadda Huawei, ayaa markii ugu horreysay shaaca ka qaaday in shirkadda Shiinaha laga leeyahay ay leedahay taleefan isku laaban shaqada. Taa baddalkeeda, wuxuu ku dhawaaqay inay horey u laheyd nooc shaqeynaya qalab leh laba shaashad oo kaliya meel yar oo u dhaxeysa ay tahay in la hagaajiyo.
Intaas ka hor, shirkadda xifaaltanka ka dhexeysa Huawei ee Samsung waxaa lagu xantaa inay ku shaqeyneyso taleefan la laaban karo. Xantaasi si dhakhso leh ayey ugu soo baxday xaqiiq ahaan, wax yar ka dib, shirkadda Koonfurta Kuuriya ayaa xaqiijisay jiritaanka xarunta, bishii Nofeembar ee sanadkii hore, waana taas isagoo u diyaarinaya inay si rasmi ah ugu soo saarto suuqa.
Richard Yu laftiisu wuxuu muujiyay usbuucii la soo dhaafay, markii la bilaabay Balong 5000 5G chipset, in Huawei waxay ku soo bandhigeysaa 5G taleefanka gacanta ee isku laaban MWC 2019. Taleefanka casriga ah ee la laaban karo ayaa la filayaa inuu soo bandhigo modemka cusub ee Balong 5000, kaas oo ah jawaabta ay shirkaddu ka bixiso Qualcomm Snapdragon X50 5G.
Blog farsamada LetsGoDigital ayaa sii daayay Noocyada 3D ee taleefanka isku laaban ee Huawei, laga yaabee inay ka timid sawir gacmeed. Ma hubno in haddii nashqadda ugu dambeysa ay sidan oo kale noqon doonto. Marka laga reebo naqshadeynta garaafka ee soo jiidashada leh, ma jiraan faahfaahino aad u tiro badan oo aan ku dheggan karno mana garan karno haddii qalabku isku laaban yahay ama gudaha ku sii jiro.
Tan iyo markii ay isticmaasho a guddi dabacsan OLED, waxaa suurtagal ah in aaladda loo furo labada dhinacba, sida la rabo. Marka ay tahay in loo isticmaalo taleefan ahaan, way duubnaataa, marka aan la adeegsanna, adeegsaduhu wuu isku laaban karaa.
Faahfaahinta aaladda ma dhameystirna. Waa inaan sugnaa ilaa MWC 2019, kaas oo lagu qaban doono magaalada Barcelona ee dalka Spain, si waxbadan looga barto taleefanka laablaaban ee shirkadda Huawei. Shirkadda weyn ee Shiinaha ayaa shir jaraa'id qabatay 24-ka Febraayo, halkaas oo aan aaminsanahay in 5G-da casriga ah ee laaban karo la soo bandhigi doono.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » La shaandheeyey tixgelintii ugu horreysay ee 3D ee taleefanka casriga ah ee isku laabma ee 5G ee Huawei
Hawlaha ugu xiisaha badan ee Gboard on Android
Android Pie ayaa imanaya Realme 2 Pro dhowaan: Geekbench ayaa duubay